mardi, 29 août 2017 22:38
Nosy Maurice: Malagasy voadonan'ny fiara, maty tsy tra-drano
Renim-pianakavina iray, teratany malagasy no maty tsy tra-drano, voadonan'ny fiara omaly alatsinainy 28 aogositra taty Maurice.
Antsirabe: «Vitrine du Vakinankaratra» andiany faha-20
Hotanterahina eo anoloan’ny Garan’Antsirabe ny 31 aogositra ka hatramin’ny 02 septembra 2017 ny «Vitrine du Vakinankaratra» andiany faha-20.
Vonona tanteraka ny FIOVA na ny «Fivondronan’ny Orinasan’i Vakinankaratra» mpikarakara ity hetsika ara-toekarena ity. Homen-danja manokana ny sehatra tsy miankina, hisy koa ny fandraisan’anjaran’ireo faritra miisa 5 avy any ivelany hampiranty ny zava-misy any aminy eto Vakinankaratra sy ny tontolo ambanivohitra satria any no tena miainga ny fampandrosoana ka hisy ny fanentanana azy ireo hamokatra hitodika amin’ny tsena sy ny fanodinana, araka ny fanazavan’ny filohan’ny FIOVA, Atoa Ramarijaona Andrianjafy.
mardi, 29 août 2017 20:23
Moramanga: Six faux-monnayeurs écroués
Ils se procurent des faux-billets à Ambatolampy-Vakinankaratra, ils achètent des faux billet au prix de 1.500 à 5.000Ariary et un faux nouveau billet au prix de 2.500 à 10.000Ariary. Après ils achètent des objets pour revendre après pour récupérer de vrais billets de banque.
Leur méfait a été découvert en allant acheter une recharge de crédit téléphonique avec des faux-billets ce qui a conduit à l’arrestation des six faux-monnayeurs, composés de deux femmes habitant à Moramanga dont l’une est une épouse d’un médecin, et quatre hommes dont trois originaire d’Andasibe et le quatrième venant de la Capitale.
700.000 Ariary d’argent liquide en vrais billets et 145 faux-billets dont 5 billets de 5.000Ariary ont été saisis.
Les faux-monnayeurs ont été déférés au Parquet de Moramanga hier, et sont placés en détention provisoire.
mardi, 29 août 2017 20:21
Vohémar: Noteren'ity Paramed hanao firaisana taminy ilay ramatoa tonga hitsindrona
Hanao fandrindram-piterahana no nanatonany hopitaly, Paramed moa no misahana izany any an-toerana, nefa dia niharan’ny fanararaotana ara-nofo an-tery Rtoa Angelica. Ny marainan’ny 02 aogositra 2017 no nisehoan’ity tranga ity tao amin’ny Kaominina NosiBe, Distrika Vohémar.
Renim-pianakaviana mbola tanora i Angelica, teraka ny 22 desambra 1996 izy. Telo ny zanany ary sivy volana ny farany. Ny fianakaviany no nanoro hevitra azy mba hanao fandrindram-piterahana amin’izay, tamin’io andro io nanantonany mpitsabo io no voalaza fa nahatongavan’ny fadimbolany voalohany taorian’ny niterahany ny zanany fahatelo.
mardi, 29 août 2017 09:52
Antsirabe: Ravan’ny Polisy ny tambazotra mpisoloky gaigilahy
Efatra mianadahy izy ireo no sarona niaraka tamin’ireo fitaovana fampiasan’izy ireo hanaovana asa ratsy. Nahitana atontan-taratasy fandrafetana tetikasa marobe ihany koa tany amin’izy ireo.
Nambaran’ny kaomisera divizionera Ramilison Celestin fa tambazotran-jiolahy matanjaka ireto sarona ireto. Fanomezan-baovao tamin’ny olontsotra iray, nisandohan’izy ireo ho Zandary no niaingan’ny fikarohana azy ireo ary dia izao tratra izao.
Natolotra ny Fampanoavana teto amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antsirabe ny alatsinainy 28 aogositra izy ireo, ary notanana amponja vonjimaika avy hatrany.
mardi, 29 août 2017 08:01
Sambava: Nofirainy antsy ilay ramatoa rehefa nanohitra ny fanolanana
Ny marainan'ny alatsinainy 28 aogositra 2017 no nitrangan'ity herisetra feno habibiana ity tao Ambatamandry, Kaominina Tanambao Daoud.
Raha iny handeha hamonjy ny tanimboliny iny ity ramatoa ity dia nifanena tamin'ny tanora lahy iray ka ity farany ity dia nitady hanolana azy fa nanohitra ary tsy nanaiky izany ilay Ramatoa.
Nentin-katezerana ilay tovolahy rehefa tsy tanteraka ny sitrapony ka dia notsatohany sy norasainy tamin'ny antsy. Nahitana dian'antsy 10 mahery ny vatan'ilay vehivavy, tapaka ny tanany. Soa fa tsy afaka ny ainy.
Nentina novonjena haingana tao amin'ny CSB1 Mahatsara ity naratra ity, avy eo dia nakarina aty amin'ny CHRR Besopaka Sambava noho ny hamafin'ny fahavoazana.
Miady mafy amin'ny fahafatesana ilay ramatoa, nandositra kosa ilay nahavanon-doza ka mbola karohina hatramin'izao.